ပြည်သူလက်ခံတဲ့ စနစ်ဖြစ်ရေး တပ်-ကိုယ်စားလှယ် ဆွေးနွေး
လွှတ်တော်အစည်းအဝေး တက်ရောက်နေတဲ့ တပ်မတော် သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တချို့ကို တွေ့ရစဉ်
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျင့်သုံးမယ့် ရွေးကောက်ပွဲစနစ် ဟာ ပြည်သူတွေ လက်ခံတဲ့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ဖြစ် ဖို့ ပြည်သူတွေကြားထဲချပြပြီး သဘောထားရယူ သင့်ကြောင်း တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်မြင့်က ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ ဒီကနေ့ တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ ရွေးကောက်ပွဲစနစ် ၈ မျိုးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၁၁ ဦးက ဒီနေ့ ဆွေးနွေးစဉ်မှာ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးကျော်မြင့်က အခုလိုဆွေနွေးသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
"ပြည်သူများအတွက် မိမိပေးလိုက်တဲ့ အသဲကြား က မဲတစ်ပြားဟာ ပြည်သူကိုကိုယ်စားပြုတဲ့ ကိုယ်စား လှယ်လောင်းများ ပေါ်ပေါက်ရေးသည် သာ အရေးကြီး ပါသဖြင့် ကျနော်တို့ ပြည်ထောင် စုသမ္မတ မြန်မာ နိုင်ငံတော်၏ လက်ရှိပကတိ အခြေအနေနှင့် အနာဂါတ်အတွက် ရေရှည်အကျိုးရှိပြီး လိုက်လျော်ညီထွေမှုရှိမည့် ရွေးကောက်ပွဲ စနစ်ကို ပြည်သူလူထုအကြား ချပြရှင်းလင်းပြီး မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူလူထုအများစု၏ သဘောဆန္ဒအား အလေးဂရုပြုပြီး ရွေးချယ်သုံးစွဲသင့် ပါကြောင်း အကြံပြုတင်ပြအပ်ပါသည် ခင်ဗျာ"
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲစနစ်လေ့လာသုံးသပ်ရေးကော်မရှင်က မဲများသူအနိုင်ယူစနစ် (FPTP)၊ PR ခေါ် အချိုးကျကိုယ်စားပြုစနစ်နဲ့ အဲဒီစနစ်နှစ်မျိုးကို ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ဆိုပြီး စုစုပေါင်း ၈မျိုးကို ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ ၂၁ရက်နေ့က တင်သွင်းခဲ့တာပါ။
အဲဒီရွေးကောက်ပွဲစနစ် ၈မျိုးကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၄၆ ဦးက ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပြီး ဒီနေ့အထိ ကိုယ်စားလှယ် ၂၈ ဦးက ဆွေးနွေးပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးက PR စနစ်ကို ကန့်ကွက်ထားပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် က ဘယ်လိုရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကျင့်သုံးမယ်ဆိုတာ လွှတ်တော်က ဆုံးဖြတ်ရမှာမဟုတ်ပဲ ပြည်သူတွေက ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ကြောင်းလည်း ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက ပြောပါတယ်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ ဆွေးနွေးနေတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲစနစ် ၈ မျိုးထဲက PR ခေါ် အချိုးကျကိုယ်စားပြုစနစ် တစ်မျိုးမျိုးအတည်ဖြစ်သွားရင် အဲဒီစနစ်ကို တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာ ကျင့်သုံးမှာဖြစ်ပြီး ပြည်နယ်တွေနဲ့ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေ မပါဝင်ဘူးလို့ သိရပါတယ်။
Military make another thing to confuse people. People, don't be crazy and confused, this is the same project of ROHINJA problem. The main problem is Military MPs in Hluttaw. Their ratio and agents for military dictator have to be changed or if they getting out from Hluttaw will solve all problems.
Oct 30, 2014 10:49 AM
ဒီလို စစ်ဗိုလ်မျိုးတွေ များများ ရှိဘို့ လိုပါတယ်။ ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်မြင့်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Oct 29, 2014 03:29 PM